Iyadoo la tixgelinayo xoojinta yareynta hawada si loo yareeyo isbedelka cimilada, iyo xajmiga dhibaatada, barnaamijku wuxuu xoojiyaa deeq-lacageedka deeq-lacageedka oo kooban oo lagu taageerayo dadaallada wax ka qabanaya caqabadaha iyo dhismaha caqabadaha ku-meel-gaadhka tamarta nadiifka ah. Barnaamijkeenu wuxuu si toos ah ugu talagalay deeq-bixiyeyaasha muhiimka ah ee isbeddelka, oo ay ka mid yihiin: socodka macaamiisha, dhiirigelinta biyaha, baahida macaamiisha sii kordhaysa, cilmi baaris iyo falanqayn, habdhismeed hay'adeed, iyo hiddaha tamarta nadiifka ah ee dhaqaalaha oo dhan. Barnaamijkayagu wuxuu doonayaa in uu kobciyo siyaasad taageero iyo jawi habeyn ah heerarka dowlad-goboleedyada iyo degaanka.
Iyadoo la raacayo haya'adda Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah, habka barnaamijku wuxuu ku salaysan yahay barashada joogtada ah iyo ficil la qabsashada iyadoo loo eegayo dhaqaalaha, siyaasadda, iyo bulshada ee aan ku hawllaneyno inuu sii socdo. Barnaamijka lacagta tooska ah ee barnaamijka ayaa si diirran ugu tiirsan Minnesota waxana uu taageersan yahay dhammaan qaybaha Dhexe ee Midowday iyada oo loo marayo lammaanayaal kaalmeeya.
Awoodda shabakada leh ilo tamar badan oo ka madax banaan. Korontada korontada waa in ay si deg-deg ah dib ugu noqotaa dib-u-cusbooneysiinta, nukliyeerka, iyo ilo kale oo qashinka ka baxsan Waqtiga fog, ka fogaanshaha saameynta ugu xun ee isbeddelka cimilada ayaa u baahan kara qaboojin iyo kala-saaridda kaarboon laga bilaabo koronto dhalida ama ilo kale oo laga saaro kaarboonka dioxide si toos ah oo ka soo jeeda jawiga.
Kala saar dhaqaalaha
Beddelka qaybaha sida gaadiidka si ay ugu socdaan koronto aan lahayn kiilo halkii laga heli lahaa shidaal fosil ah. Korontada waa in si weyn loo koray: si loo kordhiyo dabacsanaanta, tayada waxtarka, iyo kalsoonida, iyo in la kordhiyo faa'iidooyinka deegaanka.
Iibaa baahida tamarta
Kordhi waxtarnimada bey'adeena dhismaha, nidaamka gaadiidka, iyo shabakadda korantada. Inkasta oo baahida korontada laga yaabo in ay ka soo baxdo dhamaadka isticmaalka sida gaadiidka, kordhinta waxtarka dhismayaasha, geedi socodka warshadaha, iyo bixinta tamarta waxay awood u siineysaa in ay si deg-deg ah iyo qiimo-ku-ool ah u qaaddo.
Barnaamijka lacagta tooska ah ee barnaamijka ayaa si diirran ugu tiirsan Minnesota waxana uu taageersan yahay dhammaan qaybaha Dhexe ee Midowday iyada oo loo marayo lammaanayaal kaalmeeya.